Xukuumada Israel oo diiday in ay dalkeeda galaan Reps. Ilhan Omar iyo Reps. Rashida Tlaib… – Hagaag.com
Xukuumada Israel oo diiday in ay dalkeeda galaan Reps. Ilhan Omar iyo Reps. Rashida Tlaib…
Posted on 15 Agoosto 2019 by Admin in World // 0 Comments
Xukuumadda Israel ayaa go’aan is-hortaag oo diidmo ah ka gaartay Ilhaan cumar iyo Rashida Tlaib oo qeyb ka ah xubno xildhibaano oo ka soo jeeda xisbiga Dimuquraadiga Mareykanka kuwaas oo booqasho ku tegi lahaa maalinta beri deegaanka falastiiniyiinta ee Westbank iyo Israel.
Go’aanka diidmada ah ee Israel ayaa yimid kadib markii uu bartiisa twitterka uu kusoo qoray madaxweyne Trump in haddii Israel u ogolaato in ay dalkeeda booqdaan labadan xubnood ay daciifnimo iyo meel ka dhac ku tahay, sababtoo ah buu yiri waxa ay neceb yihiin Israel, oo waxa ay neceb yihiin Yuhuudda.
Gelinkii hore ee maanta jaraa`idka Washington Post oo soo xiganaya xubno saaxiib la ah Israel ayaa waxaa ay u sheegeen in labadaasi xildhibaan ay xukuumadda Tel Aviv ee Israel damacsan tahay in ay u diido dal-ku-galka Israel sababo la xiriira in ay “neceb yihiin” Israel.
Xiriir lala sameeyay Mychal Herber oo ah afhayeenadda safaaradda Israel ee Mareykanka oo arrinkan wax laga weydiiyay ayaa ka gaabsatay in ay ka hadasho, waxaana ay sheegtay in eysan ka jawaabi karin su’aashaasi.
Dhankiisa, safiirka Mareykanka u fadhiya Israel Ron Dermer oo arrintan ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Israel eysan u duudi doonin xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Mareykanka dalkooda, noocuu doono ha noqdo.
Haddii ay dhacdo in labadan xubnood ee muslimiinta ah islamarkaana ka tirsan xisbiga Dimiqiraadiga laga hor istaago safarkooda Israel waxaa ay sii hurin doonta xurgufta u dhaxeysa xisbiga Dimuquraadiga iyo dowladda Israel.
Ilhaan Iyo Rashiida ayaa asal ahaan kasoo kala jeeda dalalka Soomaaliya iyo Falastiin, waxaana ay dhowr jeer horay u muujiyeen in eysan ku faraxsaneyn siyaasadda xukuumadda Israel ee ku aadan Falastiiniyiinta.